Wararka Maanta: Jimco, May 4 , 2012-Kooxda Waayaha Cusub oo xaflad ku qabtay Easleigh (DAAWO SAWIRRO)
Jimco, May 04, 2012 (HOL) - Xaflad ay soo qaban qaabisay kooxda waayaha cusub oo ay kasoo qeyb galeen boqolaal dad ah oo reer Eastleigh ah, isla markaana loogu magac darey (Nabadi waa nolole, Dhalinyarooy Nageeh) taasoo lagu wacyi galinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xaafada Easliegh ee magaalada Nairobi
Barnaamijkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Nairobi gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa ugu horeyntii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha Kooxda Waayaha Cusub Shiine Akhyaar oo isla markaana daahfurey barnaamijka kana sheegey in ay munaasabadan tahay mid loogu gogol xaarayo xaflad balaaran oo lagu qaban doono magaalada Nairobi bisha May 15, 2012.
Kooxda Waayaha Cusub ayaa sidoo kale soo bandhigey qalab casri ah oo dhawaan loogu deeqey kooxda.
Qalabkan ayaa waxaa ka mid ah Speakero, Amps, Qalabka live musica lagu garaaco iyo waliba Jenereetar weyn oo xalay loo shidey goobta ay xaflada ka dhacaysey, kadib markii ay korontada ka tagtey xaafada Eastleigh.
Kooxda Waayaha cusub ayaa soo bandhig barnaamij faneed oo heesahana si toos ah (live) u garaacanaysay. Dadweynihii kasoo qeyb galay si diirran u daawanayay iyadoo mararka qaarna ay ka qayb qaadanayeen qoob ka ciyaarka.
Dhanka kale kooxda Waayaha Cusub ayaa xafladaasi waxay kusoo dhaweeyeen Hal-Abuurka Soomaaliyeed ee reer Minnesota Saalax Doonyaale oo goobtaasi tix gabay ah oo dhalinyarada ka wacyi galineysa is qarxinta ka tiriyey. Sidoo kale Doonyaale ayaa u mahad celiyey sida balaadhan ay kooxda Waayaha Cusub ugu soo dhaweeyeen magaalada Nairobi taniyo goortuu yimid gaar ahaan hoobalka codka halaasiga ah leh, horyaalka raabkana qaadey alfanaan Digriyow iyo marwadiisa Nafiso, sidoo kale hogaamiyaha kooxda Shiine Akhyaar oo si weyn ugu soo dhaweeyey magaalada Nairobi.
Waxaa goobtaasi isna wacdaro ka dhigey fanaanka Lixle, xidigta fanka Soomaaliyeed Falis, iyo waliba Burhaan, Axmed iyo Raguu.